Ny Internet Explorer dia mieritreritra indray ny fahafaha-mampiasa azy | Martech Zone
IE7 dia manana tanjaka lehibe, saingy nanoratra koa aho hoe maninona aho no mino fa very ny anjaran'ny tsena ary mahasosotra ny fampiasan'ny mpampiasa antonony… manokana ny rafi-menu izay mivelatra amin'ny ilany havia sy farany havanan'ny fampiharana.
Nanoratra momba aho IE7 ary fampiasana mahatsiravina izany iray volana mahery lasa izay. Miseho ilay Ny ekipa IE dia namerina nandinika ny paikadin'izy ireo miaraka amin'ny famoahana fikojakojana IE7 ho avy. Ny bara fisehon'ny menio dia haseho tsy misy hatak'andro.
Alohan'ny hieritreretanao hoe mikapoka ny lamosiko aho, tokony ho fantatrao fa izaho am faly fa nivoaka tamin'ny sisin-tany mahazatra IE ary nanandrana paradigma mpampiasa vaovao. Ny olako dia tsy azoko antoka fa nanandrana tanteraka an'io paradigma io izy ireo talohan'ny namoahany azy.
Heveriko fa ho tetika tsy mampino ho an'ny ekipa ny mampiditra ny fantsom-pitaovana sy ny fiasa 'Office Button' izay, RNH, dingana iray mahafinaritra eo amin'ny fampiasana amin'ny Office 2007. Tsy vitan'ny hoe hanatsara ny fampiasana ny navigateur izy io, fa hampiavaka azy amin'ny fifaninanana, hampiditra ny olona amin'ny interface ribbon - angamba hahazo fananganana fanampiny, ary hitondra ny vokatra Microsoft mifanaraka kokoa amin'ny sisa amin'ny fianakaviana.
Mazava ho azy, mbola mino aho fa ny browser izay hanitsaka ny fifaninanana aloha no mpitety tranonkala izay mampiditra ireo singa mpiorina indrindra 'ivelan'ny boaty'. Raha tsy misy fepetra takiana amin'ny fisintomana, raha afaka mandahatra programa amin'ny datagrid aho, tonian-dahatsoratra HTML, singa ao amin'ny kalandrie, fanodinkodinana sary… miaraka amin'ny tag sy ny fomban-drazana xhtml manokana, hampivelatra ny rindranasa ho an'ny mpitety tranonkala aho alohan'ny hafa!
Tags: Facebook MarketingGoogle+ ho an'ny DummiesHollis ThomasesJesse mijanonafandefasanaMpandinika ara-media sosialy
Clicky mandefa ny Google Gadget